Free Thinker: မြွေဆိပ်ဖြေဆေးအတွက် ပါဝင်လှူဒါန်းလိုသူများ
စင်ကာပူ မြန်မာပရဟိတအဖွဲ့များ၊ မြွေဆိပ်ဖြေဆေးကော်မတီ၏ ဦးဆောင်လှုပ်ရှားမှုဖြင့် မြန်မာပြည်၊ မြွေဆိပ်ဖြေဆေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်အားဖြည့်ကာ မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်ရှိ မြွေကိုက်များသော ဒေသများသို့ မြွေဆိပ်ဖြေဆေးများကို နှစ်စဉ်လှူဒါန်းလျှက် ရှိပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက်နေ့က လှူဒါန်းငွေ ကျပ် ၈၆၆၄၀၀ ဖြင့် မြွေဆိပ်ဖြေဆေး ၆၅ လုံး ၀ယ်ယူကာ၊ တစ်နေရာလျှင် ၁၃ လုံးနှုံးဖြင့် ၅ နေရာသို့ လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မေလ ၁၇ ရက်နေ့က အလှူငွေ ၅၅ သိန်း ဖြင့် မြွေဆိပ်ဖြေဆေး ၄၃၆ လုံးဝယ်ယူကာ၊ တစ်နေရာလျှင် ၁၆ လုံးမှ အလုံး ၂၀ ထိ စုစုပေါင်း ၂၄ နေရာသို့လည်းကောင်း အသီးသီး လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့ကြပါသည်။
ယခုနှစ်တွင်လည်း စုပေါင်းမြွေဆိပ်ဖြေဆေးလှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားကို အောက်ပါအတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် ကြွရောက်ပါရန် လေးစားစွာ ဘိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေ့ရက်။ ။ ၇ - ၃ - ၂၀၁၂ (၁၃၇၃ ခု၊ တပေါင်းလပြည့်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)
အချိန်။ ။ နေ့လည် ၃ နာရီ
နေရာ။ ။ နာဂလိုဏ်ဂူ၊ ကလေးဝတောရကျောင်း၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ စွယ်တော်စေတီတော်အနီး
ဖုံး - ၆၅၁ ၀၆၄၊ ၆၆၀ ၇၉၈
လောလောဆယ်ကောက်ခံရရှိသော အလှူငွေအရ မြွေဆိပ်ဖြေဆေး အလုံး ၅၀၀ ကျော်ဝယ်ယူနိုင်လိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းပါသည်။ စုစုပေါင်း လှူဒါန်းမည့်နေရာမှာ ၄၅ နေရာခန့်ရှိပါသည်။ သို့အတွက် တစ်နေရာလျှင် မြွေဆိပ်ဖြေဆေး ၁၂ လုံးခန့် လှူဒါန်း နိုင်လိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းပါသည်။ နောက်ထပ်ရရှိလာသော အလှူငွေပေါ်မူတည်ကာ ဆေးလုံးရေ တိုးနိုင်ပါသည်။
မြွေဆိပ်ဖြေဆေးလှူဒါန်းပွဲတွင် ဆေးလက်ခံရယူရန် နယ်မှရန်ကုန်သို့လာရေးအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြွေဆိပ်ဖြေဆေး လက်ခံရယူရန် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး၊ အများဆုံး နှစ်ဦးဆိုလျှင် ပိုမိုသင့်တော်ပါလိမ့်မည်။ လူများလျှင် စရိတ်အကုန်အကျများပါလိမ့်မည်။
မြွေဆိပ်ဖြေဆေးလှူဒါန်းမည့် ကလေးဝတောရကျောင်းမှာ စွယ်တော်စေတီနှင့်နီးသဖြင့် ကျောင်းသို့လာရန် အခက်အခဲ ရှိသူများ စွယ်တော်စေတီသို့လာခဲ့ပါရန်နှင့် စွယ်တော်စေတီတွင် ကြိုဆိုနေရာချထားရေးအဖွဲ့မှ ကြိုဆိုနေမည် ဖြစ်ပါသည်။
မြွေဆိပ်ဖြေဆေးလှူဒါန်းပွဲအတွက် ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုံးနံပါတ်များ (မြန်မာပြည်) -
၁။ ဆရာတော် အရှင်ဇာဂရာဘိဝံသ - ကလေးဝနာဂလိုဏ်ဂူဆရာတော် - နာယက - ၀၁-၆၅၁၀၆၄ / ၀၉-၈၆၀၁၅၄၆
၂။ ခွက်ခွင်း တိပိဋကဆရာတော်ဘုရားကြီး - နာယက - ၀၉-၅၁၁၄၂၂၄
၃။ ကိုသောင်းတန် - ၀၉-၉၄၃၀၃၀၄၁၆ (စနေဓမ္မမိတ်ဆွေများအဖွဲ့)
၄။ ကိုကျော်ဇော - ၀၉-၉၈၆၃၄၄၇၆ (စနေဓမ္မမိတ်ဆွေများအဖွဲ့)
၅။ ဒေါ်ခင်စန်းယု - ၀၉-၇၃၀၆၁၀၆၄၊ ၀၉-၅၀၄၈၅၄၆ (စနေဓမ္မမိတ်ဆွေများအဖွဲ့)
၆။ မယမင်းသိန်း - ၀၉-၇၃၀၄၁၂၃၈ (Lotus Foundation)
၇။ မသိင်္ဂီ - ၀၉-၅၄၁၅၀၉၉၊ ၀၁-၃၇၂၀၀၃ (Save The Aged)
၈။ မဖြူရောင် - ၀၉-၇၃၀၅၈၃၉၈
၉။ မသီသီခိုင် - ၀၉-၇၃၀၆၂၉၄၆
၁၀။ ဒေါ်ကျင်ကျင် - ၀၁-၇၀၉၅၁၀
စင်ကာပူနိုင်ငံနှင့် အခြား နိုင်ငံ / ဒေသများမှ မြွေဆိပ်ဖြေဆေးအတွက် ပါဝင်လှူဒါန်းလိုပါက အောက်ပါ ဖုံးနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ လုံခြုံစိတ်ချရမှုအတွက် ဘဏ် Account No. များကို မထည့်ထားပါ။ အကယ်၍ လှူဒါန်းလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ ဖုံးနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ဘဏ် Account No. များကို တယ်လီဖုံး sms ဖြင့် ပို့ပေးပါမည်။
၁။ ကိုကျော်ဝဏ္ဏ - (065) 8236 9159
၂။ ကိုသောင်းတန် - (065) 9325 8894
၃။ ဒေါ်ခင်စန်းယု - (065) 8298 6297
၄။ မဆုရည်မွန် - (065) 9066 2407
၅။ ဦစိုးဝင်း - (065) 8488 8149
၆။ ကိုကျော်သူအောင် - (065) 9271 2618
၇။ ကိုကျော်ကျော်ထွေး - (065) 9125 0701
၈။ ကိုရန်နိုင်စိုး - (065) 9459 0891
၉။ ကိုစောဝင်းသန်း - (065) 9241 6785
၁၀။ ကိုနွယ်ဝင်း - (065) 9230 1304
၁၁။ ကိုလှစိုးဦး - (065) 8615 4458
၁၂။ ဦးမြင့်သိန်း - (065) 8159 3989
၁၃။ ဦးအေးငြိမ်း - (065) 97303027
အကယ်၍ ထပ်မံစုံစမ်း မေးမြန်းလိုပါက ဦးမြင့်သိန်း - mtheingeo@gmail.com, ကိုကျော်ဝဏ္ဏ - nammobds@gmail.com, ဦးအေးငြိမ်း - y_nyein@yahoo.com.sg တို့ထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း။
ဖုံး - 97303027 (စင်ကာပူ)
Posted by အေးငြိမ်း at 11:41 PM
Dear U Aye Nyein,
Please kindly be suggested to check their usage of the medicine from the previous donations. Because some places might use all of them but some places might not be finished. Those medicine come with expired dates. So, if you know almost exactly of their usage, you can adjust the quota for different places. ( PS, I believe that the medicine is not enough yet but anyway you need to analyze to be effective donation. ) I really appreciate and thanksalot for your initiatives.